Waa waqtigii qof reer banaadir u dhashay laga dhigi lahay R’iisul wasaaraha soomaaliya | Anti-Tribalism
← The cause for the failure of the union of Somaliland and Somalia
Madaxweynaha oo saacadaha Soo socda ku dhawaaqaya R/Wasaaraha Cusub iyo Caqabadaha hareeyay ….. →
Waa waqtigii qof reer banaadir u dhashay laga dhigi lahay R’iisul wasaaraha soomaaliya
September 14, 2012 – Somalia waxay u jeesatay dhanka aqoonta iyo oggolaashaha awooddii Odeyaasha Dhaqanka oo in muddo ah la aasay. Runtii isma lahayn si fudud ayaa looga dhaadhici karaa in ay ka tanasulaan xubin-nimadooda nuskii la go’aamiyay in laga saaro Baarlamaankii 500 ka badan xubin lahaa, inkastoo nuska haray loo qorsheeyay Aqalka Odeyaasha.
Wax kasta waxaa sahal ka dhiga aqoonta la addegsanaayo, halkii qoriga la adeegdsan lahay. Maanta Baarlamaanka waxaa ku jira tiro badan ee Qurba Joogga Soomaaliyeed oo diyaar u ah in ay ka qayb qaataan dib-u-dhiska dalka.
Inkastoo ay guusha Madaxweynenimada Soomaaliya ay raacday qof dalka deggan, haddana, Qurba-joog waaween oo sumcad ku leh dalalka Europe iyo Marakanka ayaa ka qayb qaatay doorashada Madaxweynaha dalka oo lagu qabtay Muqdisho maalintii 10 September 2012.
Hawshaas si fiican ayay ku dhamaatay, waxaanna la doortay Mudane Xasan Shaikh Maxamuud in uu noqdo madaxweynaha afarta sano ee soo socota. Doorashadaan waxaa ka horeysay doorashada Guddoomiyaha iyo Guddoomiye ku-xigeenada Baarlamaanka oo iyagana si demoqradi ah loo doortay.
Intii sano ee la soo dhaafay ma dhicin in Soomaaliya ay yeelatay hoggaan heerkooda aqooneed sidaan u sareeya. Sidaas darteed rajada ummadda Soomaaliyeed ay qabaan waxay tahay in halkii ay qabiil iyo quursi u addegsan jireen ay u adeegsadaan aqoon iyo is-tixgelin.
Dawlad nimada intii nala siiyay waxaa laga joogaa 52 sano – 1960-2012 -. Nus qarnigaas, dalka waxaa maamulkiisa soo haayay qabaa’ilka lagu tilmaamo inay yihiin kuwa sar-sare, ama ha noqdeen Madaxweyne ama Ra’iisul Wasaare.
Calaamadaha aan arkeyno waxay muujinaayaan in qaranka Soomaaliyeed uu u bislaaday is beddel xagga siyaasada in uu sameeyo.
Runtii marar badan ayan maqlay Soomaalida qaar ka mid ah oo leh in ay fiicnaan lahayd hoggaanka dalka in loo dhibo Reer Banaadir, oo wax dad kale leeyahay damac ka galaynin, iskaba daa, wax dawlad leedahay oo ummadda oo dhan ka dhexeeyo oo ishooda ku soo haayaan.
Wax kasto mar ayuu bilaawdaa, is-beddelna, si lama filaan ama si kale ayay ku yimaadaan. Madaxweynaha cusub, Guddoonka Baarlamaanka cusub, Xubnaha cusub oo barlaamaankaan hadda furmay ku soo biiray oo ay u badan yihiin dad aqoon leh oo ku soo barbaaray; wax ku soo bartay waxna ku baraayo mujtamac aan is takoor lahayn oo runtii bogga ay maanta u fureen is-beddelka taariikhiga ah in Ilahay ka dhigo mid ku sajilan bilawgii dhammaadka dhibaatadii ay ummadda Soomaaliyeed soo martay lixdankii sano ee la soo dhaafay.